I-Gemlight Cutting Tools Co., Ltd. yasungulwa ngo-1990, kanti ifektri entsha yakhiwa ngo-2000 eShuangtian Industrial Park, eDinngningdian Town, eDingzhou City. Imboni entsha ihlanganisa indawo engamamitha-skwele ayi-12000 futhi isidlulile izitifiketi zohlelo lwamazwe omhlaba ezifana ne-ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2018, futhi yathola izitifiketi zefektri ze-TUV, SGS.
Sinezintambo ezimbili zokucima nokushisa ukushisa okuqinisekisiwe kwemvelo, ezisebenzisa igesi yemvelo kanye nogesi njengamandla okushisa ukuvikela imvelo nokwenza ngcono indawo yokusebenza yabasebenzi bethu. Ocelemba abangama-40,000 baphathwa ukushisa nsuku zonke kulayini ababili, futhi sinabasebenzi abahlanu bokuphathwa kwekhwalithi ukuqinisekisa ngokuphelele ukuthi ubumnene, ukuqina nobulukhuni bezinhlamvu kuyahlangabezana nezindinganiso zefektri.
Ngemigqa emibili yokuqinisekisa ukushisa nokushisa ukushisa, imigqa emibili ukushisa iphatha ocelemba abangama-40,000 ngosuku. Olayini ababili basebenzisa igesi yemvelo nogesi njengamandla okushisa, kunciphisa ngempumelelo ukungcola kanye nezinhlayiya, kuhlanza indawo yokusebenza yabasebenzi nokunciphisa ukukhishwa. Ngabasebenzi aba-5 bokuhlolwa kwe-QC baqinisekisa ubucayi, ukuqina nobulukhuni bezinhlamvu, ukuze yonke imikhiqizo eshiya ifektri ihlangabezane nezindinganiso zefektri.
Ngabantu abangu-10 be-R & D banesibopho sokusekelwa kobuchwepheshe bemishini yefektri. Unamalungelo obunikazi afinyelela kwayi-12 wemodeli yokusetshenziswa. Ngomnyango wezokulungiswa kwezobuchwepheshe kanye nomnyango we-R & D, baqhubeka ngokuqamba nokwenza izinto ezintsha. Ikhwalithi yefektri ingaqinisekiswa ngempumelelo, futhi ekusebenzeni kahle kokukhiqiza ukwenza ngcono, kunciphise izindleko zokukhiqiza, ukuzuzisa iningi lamakhasimende.
Sihambisana nomqondo wokuthi "Ikhwalithi iyimpilo", sinamathela ebuqothweni bebhizinisi, ngemikhiqizo esezingeni lokuqala kanye nezinsizakalo kumakhasimende emhlabeni jikelele!